के बैंकमा धितो राखेको सम्पत्ति बेच्न पाइन्छ? कस्तो छ प्रकृया? – Esewanews
Home / Headline / के बैंकमा धितो राखेको सम्पत्ति बेच्न पाइन्छ? कस्तो छ प्रकृया?
के बैंकमा धितो राखेको सम्पत्ति बेच्न पाइन्छ? कस्तो छ प्रकृया?
Shivaram Khadka Headline, अर्थ, समाचार Leaveacomment 8304 Views
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तपाईंको प्रोपर्टी धितो नराखी घरकर्जा दिँदैनन् । बैंकबाट घरकर्जा लिँदा अनिवार्य धितो बन्धक राख्नुपर्ने हुन्छ । र, धितो फुकुवा नहुँदासम्म बिक्री गर्न पाइँदैन ।
यदि धितो बन्धक राखेको सम्पत्ती विशेष कारणले बिक्री गर्नुपर्ने भयो भने पाइन्छ कि पाइँदैन ? स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंककी रिलेशन म्यानेजर दिप्ती राउत भन्छिन्, ‘बैंकबाट लिएको ऋण अग्रिम भुक्तानी गरेर जग्गा फुकुवा गराइ बिक्री गर्न पाइन्छ ।’
घर कर्जा लिँदा बैंकमा धितो बन्धक राखेको सम्पत्ति बिक्री गर्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि निश्चित प्रकृया पुरा गर्नैपर्ने राउतको भनाइ छ । बैंकबाट लिएको ऋण चुक्ता नगरी सम्पत्ति फुकुवा हुँदैन, सम्पत्ति फुकुवा नभइ बिक्री गर्न मिल्दैन । बैंकले तपाईंको सम्पत्ति मालपोत कार्यालयमा गएर बन्धक गरेको हुन्छ ।
यदि तपाईंले धितो बन्धक राखेको सम्पत्ति बिक्री गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला खरिदकर्तासँग डिल गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंलाई खरिदकर्ताले पहिल्यै पैसा दिएको खण्डमा बैंकमा ऋण चुक्ता गरी सम्पत्ति फुकुवा गर्न सक्नुहुन्छ ।
यसका लागि खरिदकर्तासँग बैनाबापत बैंकको ऋण चुक्ता हुनेगरि अग्रिम पैसा लिन सकिन्छ । राउतका अनुसार घरजग्गा खरिद गर्न चाहेको व्यक्तिको आम्दानी, कागजपत्र लगायत सबै प्रकृया मिलेमा सोही बैंकबाट ऋण लिएर ऋण चुक्ता गरी धितो बन्धक फुकुवा गर्न सकिन्छ ।
तपाईंले ऋणको अग्रिम भुक्तानी गरेपछि बैंकको कर्मचारीले मालपोत कार्यालयमा पुगेर धितो बन्धक फुकुवा गरिन्छ । तपाईं जग्गाधनी पनि बैंकको कर्मचारीसँग मालपोत जानुपर्छ । यो काम गराउन दिनभरी नै लाग्छ । तपाईंको धितो बन्धक फुकुवा भएपछि मात्र बैंकले तपाईंलाई घरजग्गाको लालपुर्जा लगायत कागजपत्र दिन्छ। धितो राखेको घरजग्गा अरुलाई बिक्री गर्नका लागि पनि तपाईसँग लालपुर्जा अनिवार्य चाहिन्छ ।
यदि तपाईसँग पैसा भएमा बैंकको ऋण आफै तिरेर घरजग्गा फुकुवा गर्न सक्नुहुन्छ । नत्र तपाईंले घरजग्गा खरिद गर्न चाहेको व्यक्तिसँग बैंकको ऋण तिर्न पुग्नेगरी बैना वा खरिद रकम बैंककै नाममा भुक्तानी दिनेगरी डिल गरेमा सबैभन्दा सहज हुन्छ ।
यदि खरिदकर्ताले बैंक ऋणमा सम्पत्ति खरिद गर्न लागेको हो भने बैंकले ऋण स्वीकृत भएको पत्र दिन्छ र त्यसकै आधारमा बैंकले सम्पत्ति फुकुवा गरिदिन सक्छ ।
बैंकले भू–सेवा लिएपछि मालपोत जानु नपर्ने
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवालाई समय सपेक्ष परिवर्तन गरी सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने उद्देश्यले भूमि सुधाररमालपोत कार्यालयहरुमा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एआरआइएमएस), अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली (डीएमएस) तथा पब्लिक एक्सेस मोडल (पाम) प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
‘पाम’ सेवाग्राहीले इन्टरनेटको माध्यमबाट जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काम गर्न सकिने गरी विकास गरिएको प्रणाली हो । विभागले जग्गाको रोक्का तथा फुकुवाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई भू–सेवा सञ्चालनका लागि आवेदन दिन आग्रह गरेको छ । बैंकहरुले भू–सेवा केन्द्रको अनुमति लिने बित्तिकै बैंकहरुले आफ्नै कार्यालयबाट ऋणीको जग्गा रोक्का तथा फुकुवा गर्न सक्नेछन् ।
अहिले जग्गा रोक्का तथा फुकुवा गर्नका लागि सेवाग्रही र बैंकका प्रतिनिधि लेखापढी व्यवसायीकहाँ गएर निवेदन तयार पारी दिनभरी मालपोत कार्यालयमा लाइन लागेर काम गर्नुपर्छ ।
Cover Image: KSM Services (www.ksmnepal.com)
१६ असार २०७८, बुधबार १३:५३